Ngathi - Global ARCH
Global ARCH / Ngathi
Umnqophiso woManyano lweHlabathi lweeRheumatic kunye neentliziyo zentliziyo (Global ARCHKukuphucula iziphumo zobomi behlabathi liphela kwisifo sentliziyo esiqala ebuntwaneni ngokuxhobisa imibutho yezigulana kunye neentsapho. Ubulungu bukhululekile kwaye buvulelekile kulo naliphi na iqela elikhonza izigulana zentliziyo ezizelwe kunye / okanye zamathambo kunye neentsapho zazo. Umanyano lwethu luzisa imibutho evela kwihlabathi liphela ukuze ifunde, isebenzisane, kwaye ithethe kunye ngeemfuno ezingafezekiswanga zabo baphila neemeko zentliziyo eziqala ebuntwaneni.
Sidibanisa kwaye someleze Isifo sentliziyo esibeleken
Sithetha phandle yamalungelo esifo sentliziyo esibelekweni kunye nesifo sentliziyo rheumatic Iphulo lamaLungelo nangokukhuthaza kunye nokuxhasa ubhengezo olukhokelwa sisigulana kunye nosapho
Siyafundisa abaguli, iingcali, kunye nemibutho yokunceda kwiimfuno zehlabathi zesifo sentliziyo esibelekweni kunye nezigulo zentliziyo ye-rheumatic kunye nemicimbi ebaluleke kakhulu kuluntu lwethu.
Si dibana kunye nemibutho yobungcali kunye neyokunceda ukukhuthaza iinkonzo ezingcono kumntu wonke ochaphazelekayo sisifo sentliziyo esiqala ebuntwaneni.
Umanyano lweHlabathi lweeRheumatic kunye neentliziyo zokuzalwa (Global ARCH) yaqala ngeqela elinombono wesifo sentliziyo esibelekweni kunye neenkokheli zesifo sentliziyo, ngasinye sichaphazeleka ngokuthe ngqo sisifo sentliziyo esivela ebuntwaneni. Babelane ngombono wokuguqula isifo sentliziyo esibelekweni kwihlabathi liphela kunye nesifo sentliziyo isifo samathambo ngokuxhobisa imibutho yezigulana kunye nokhokelwa lusapho.
Ehlotyeni lika-2017, babiza eyokuqala Ingqungquthela yobuNkokheli beNtliziyo yeZizwe eziManyeneyo (ICHLS), eqokelele isifo sentliziyo esingama-30 kunye neenkokheli zesifo sentliziyo esisifo samathambo ezimele amazwe angama-21 kumazwekazi amathandathu. Ukwenza ilizwi elinamandla egameni lesifo sentliziyo kunye nesifo se-rheumatic isifo seentliziyo kunye neentsapho, abathathi-nxaxheba bavumile ngamxhelo mnye ukwenza umbutho omtsha, ozimeleyo ongajonganga nzuzo obizwa ngokuba yiGlobal Alliance yeRheumatic kunye neentliziyo zentliziyo (Global ARCH). Umbono ngokuhlangeneyo Global ARCH Kukuphucula nokwolula ubomi bentliziyo yomntwana kunye nabantu abadala- nokuba bazalelwe phi.